Kooxda Manchester City oo aan wax dalab ah ka gudbin doonin Lionel Messi sanadka soo socda… (Maxaa isbedelay?) – Gool FM
Haaruun November 24, 2020
(Barcelona) 24 Nof 2020. Lionel Messi rabitaankiisa ahaa inuu isaga tago Kooxda Barcelona xagaagii la soo dhaafay ayaa soo jiitay indhaha caalamka iyadoo kooxo dhowr ah la la xiriiriyey inuu u dhaqaaqi doono.
Kooxda ugu macquulsanayd ee uu ku biiri lahaa haddiiba uu tagayo waxay ahayd Kooxda Manchester City, laakiin waxay umuuqataa in kooxda Tababare Pep Guardiola aysan daba socon doonin oo aysan wax dalab ah ka gudbin doonin xiddiga reer Argentine sanadka soo socda.
Iyadoo qandaraaskiisa uu ku eg yahay xagaaga soo socda, isla markaana uu si cad uga carreysan yahay xaaladda haatan ee kooxdiisa, dib ula midoobidda tababarihiisii hore ee Barcelona ayaa u muuqatay mid macquul ah, xitaa kaddib markii uu go’aansaday inuu sii joogo Camp Nou xilli ciyaareed kale.
Hase yeeshee Shabakadda Sky Sports ayaa warinaysa in Manchester City aysan u dhaqaaqi doonin Messi xagaaga 2021-ka sababo la xiriira mushaharkiisa sare iyo da’diisa.
Messi ayaa noqonaya 34-sano jir sanadka soo socda inkastoo aan la ogeyn inuu si cad u lumin doono awooddiisa, kooxda Cityzens ayaana iska diiday oo dib u dhigtay lacagta badan ee looga baahan yahay inay ku soo xero geliso ciyaaryahankan ku dhow dhammaadka mustaqbalkiisa ciyaareed.